'Vala ngaphakathi' sisizathu esibi sokuzonwabisa, ojolise kwiNawomi Watts | - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa 'Vala ngaphakathi' sisizathu esibi sokuthathela ingqalelo umdlalo weqonga, obeka inkwenkwezi kuNahomi Watts
'Vala ngaphakathi' sisizathu esibi sokuthathela ingqalelo umdlalo weqonga, obeka inkwenkwezi kuNahomi Watts
UNawomi Watts ungene Vala .Inkampani Europa Corp.
ukumangalisa vs ibhokisi yeofisi
Ulala nini? Ngaphandle kwetalente yakhe kunye nokungoyiki, uNahomi Watts wenza iimovie ezininzi kunaye nawuphi na umntu kwezamashishini. Ungumfazi uEthan Hawke. I-lunk-intloko, ebhalwe kakubi, yenza ngokungakhathali, imfumba eqondiswe ngomthi yemifanekiso bhanyabhanya ye-spook ebizwa Vala yeyona yamva kwaye imbi kakhulu. Kwakungekho luhlolisiso lwabagxeki, oluhlala luphawu oluqinisekileyo lokuba unebhombu ezandleni zakho. Ngoku ndiyibonile, ndiyazi ukuba kutheni.
( 0/4 iinkwenkwezi )
Yeluswa nguwe: UFarren Blackburn
Ibhalwe ngu: UChristina Hodson
Inkwenkwezi: UNaomi Watts, uCharlie Heaton noJacob Tremblay
Ixesha lokuqalisa: 91 imiz.
Iqala ngentloko eyothusayo yokungqubana xa uWatts, ugqirha wezengqondo ogama linguGqirha Mary Portman ephulukana nomyeni wakhe kwaye enamathela kuxanduva lobomi bokukhathalela oyena usindileyo kuphela, unyana ongazinzanga oneminyaka eli-18 ubudala ogama linguStephen, idlalwe ngumntu omtsha ongenantlonelo uCharlie Heaton, onearhente ekusenokwenzeka ukuba iyacima Vala ukusuka kwinkcazo yomthengi wakhe njengoko sithetha. Ngesizathu esithile ukuba ingumbhali osandul 'ukuvela kwisikrini uChristina Hodson kunye nomlawuli we-Bhritane wase-Bhritane u-Farren Blackburn owaziyo, ugqirha olungileyo uxhonywe kwindlu ekude eMaine ngaphandle komkhonzi, echitha wonke umzuzu wobomi bakhe bodwa ukuba ahlambe, esondla kwaye ephulula i-ward yakhe encinci . Unxibelelwano lwakhe kuphela kunye nomhlaba ongaphandle ngugqirha wakhe (u-Oliver Platt), omcebisa nge-Intanethi kwiscreen sekhompyuter. Xa eqala ukuva ingxolo ezindongeni naphantsi komgangatho kwaye imikrwelo engaqondakaliyo ivele ebusweni bukaStefano, ukrokrela umoya wenkwenkwana engevayo eyayilahlekile eyakhe yanyamalala yaza yanikezelwa ekufeni. Ukuncipha kwakhe okuxakekileyo kuphakamisa ukuba uphethwe yinto ekuthiwa yi-sleep parasomnia, nokuba yintoni leyo, kodwa njengoko ekhula exinezelekile kukoyika, umnenga we-blizzard uphosela indlu ebumnyameni kwaye wenza ukuba iindlela zingahambeki kakhulu ukuba zibaleke ukulala iipilisi.
Ke oko kuthethwa njengecebo elilelona liphoselwe kwingxelo yemozulu: Umntwana olahlekileyo (uJacob Tremblay, umpopi owenza igalelo elikhulu Igumbi) ayikho ngaphakathi endlwini kuphela, kodwa yena nogqirha bobabini bazifumana bebanjiwe nguStephen oneminyaka eyi-18, ongenguye kuphela hayi umntu okhubazekileyo okhubazekileyo kodwa oxakekileyo, o-qux-hunk ovelele olangazelela ukwabelana ngesibhedlele sakhe esibhedlele kunye nomama wakhe wesibini kwaye ambuyisele uthando lokwenyani. (Kufuneka ukuba ibingabo bonke abo bathwala utywala obunqunu.) Yonke imovie ibonisa wonke umntu esilwela ukuhlala ephila ngelixa eleqwa zizithunzi ngumntu onezando. Akukho namnye uvuyo lokwenyani kuyo yonke le nto. Ndinento enkulu eyoyikisayo kwisitya sam segolide.
Sibonile konke ngaphambili kwiifilimu ezincinci ze-low-budget slasher. Lo unabadlali abangcono-abachithwe kakubi kwaye bashiye ukufuna ingqesho engcono kwenye indawo.
Yithande okanye Uyithiye, 'URoseanne' Yayingumboniso we-2018 we-Most-Watched TV Show
UJack Ma Ugxotha iiNkxalabo zabucala zeTekhnoloji yaseYurophu 'njengeeNkathazo ezibangelwa liXhala'
I-China yenza i-Spacecraft Space eyimfihlo kunye nokuHamba kweNyanga yokuHamba yokuFudumeza uMdyarho weNdawo
UNicole Riegel's 'Holler' ungowesigwebo esinye njengo 'Nomadland'
Ndijongeka kakubi kwimifanekiso
oj simpson ukuba ndiyenzile udliwanondlebe
Izikolo ezithengisa izindlu nomgangatho ophezulu
I-online texas ibamba imali yokwenene usa
fumana irekhodi lomntu lolwaphulo-mthetho simahla